Sound Devices ၏မျှော်လင့်ထားသည့် SL-6 ပါဝါနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်ယခုတင်ပို့ခြင်း။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အသံဖုန်းများအတွက် '' Highly မျှော်လင့် SL-6 အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်အခုတော့သင်္ဘော
အသံကိရိယာများ'' Highly မျှော်လင့် SL-6
အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ် NOW ကတင်ပို့
အဆိုပါ 688 နှင့်ကြိုးမဲ့ receiver အကြား accessory Simplified Interconnection
REEDSBURG, WI, ဇွန် 29, 2015 - အသံဖုန်းများအတွက်အသံနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်ရုပ်မြင်သံကြားအဘို့, ရုပ်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအထူးကု, ထိုကြောင်းကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် SL-6 ယင်း၏ 688 ရောနှော / အသံဖမ်းများအတွက်အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်ကယခုသင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ optional ကို SL-6 ဆက်စပ်ပစ္စည်းသိသိသာသာအထိသုံး Dual-ရုပ်သံလိုင်း, slot က-in ကိုအသံဖမ်းများအတွက်တင်းကျပ်တဲ့ပေါင်းစည်းမှုပေးခြင်းအားဖြင့် 688 နှင့်ကြိုးမဲ့အကြားချိတ်ဆက် streamlines ။ SuperSlot-သဟဇာတအသံဖမ်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါ, SL-6 wireless receiver ကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်နှင့်၎င်း၏ပြီးသားအထင်ကြီးအာဏာနှင့်အင်တင်နာဖြန့်ဖြူးဖို့အပြင်၌, 688 ရောနှောထံမှတိုက်ရိုက်စောင့်ကြည့်။
"ကြိုးမဲ့အသံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုထုတ်လုပ်မှုသံကိုရောနှောရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအတွက်လာမယ့်ခြေလှမ်းကိုယ်စားပြုကော်မတီကျနော်တို့ကဒီသဲဆန်းသစ်တီထွင်မှုယခုရရှိနိုင်ကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟုပေါလုဣဇာက်, ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ "သူတို့ညျဘဏ်ဍာအကွာအဝေးအဘို့ဤနည်းပညာအသစ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့စတင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သည်လယ်ပြင်၌အကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်ထံမှတုံ့ပြန်ချက်ကြားနာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
အဆိုပါ SL-6 အလွယ်တကူ 688 ထိပ်တန်း panel ကိုတိုက်ရိုက်အလေးထား။ ယင်း၏ NP1 ဘက်ထရီ slot က, USB အားသွင်းပေါက်နှင့်အတူ, နှစ်ခု 12-V ကိုအထီးကျန်ရလဒ်နှစ်ခု Non-အထီးကျန်တိုက်ရိုက်ဘက်ထရီရလဒ်, အ SL-6 ကိရိယာတစ်ခုစံပြ Power အချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SL-6 features တွေ အသံဖုန်းများအတွက်'' SuperSlot™ စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံး Non-စီးပွားဖြစ်, ပွင့်လင်းကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်နှင့် interfacing စံအဖြစ်မှတ်နည်းပညာ, ။ SuperSlot ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် အသံဖုန်းများအတွက်Lectrosonics, Sennheiser, Wisycom နှင့်အသံ, Ltd. အပါအဝင်ဦးဆောင်ကြိုးမဲ့ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုနှင့်အတူ '' ပူးပေါင်း,
မှုအတွက်အဓိကဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အသံဖုန်းများအတွက်'' ရောနှောနှင့်အသံဖမ်းပစ္စည်းများ, ပု 688 ရဲ့အကောင်းဆုံးထဲကနေအလားတူ အသံဖုန်းများအတွက်'' အောင်မြင်သော 633, 664 နှင့် 788T ယူနစ်နှင့်စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်အာဏာအရှိဆုံးခရီးဆောင်ရောနှော / အသံဖမ်းယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ MixAssist အဖြစ်လူသိများ Auto-ရောစပ်၏ 12-Channels, ကဲ့သို့သော Stand-ထွက် features တွေတပ်ဆင်ထားကောင်းပါသည်™, 12-သွင်းအားစု, ရှစ်လက်ငင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောစပ်ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်း, 192-kHz နမူနာ, သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အသံနှောင့်နှေး, PowerSafe™ နှင့် QuickBoot™.
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ဒီဇိုင်းများနှင့်အဘို့နှစ်ခုလုံးထုတ်ကုန်တွင်လည်းထုတ်လုပ် အသံဖုန်းများအတွက်'' အသံထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက် 'သည်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အသံဖုန်းများအတွက် အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode ရုပ်မြင်သံကြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, newsgathering, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်နှင့်အသံစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်း application များအတွက်ခရီးဆောင်အသံရောနှော, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်ဂုဏ်ယူစွာအစာရှောင်ခြင်း-PACE, မစ်ရှင်-အရေးပါစတူဒီယို applications များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစား, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်များ, နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင်မျိုးစုံ-Source ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး၏အကွာအဝေးဖြေရှင်းပေးသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ဌာနချုပ် Madison, Wisconsin ပြည်နယ်နှင့်ဘာလင်, ဂျာမနီအတွက်အပိုဆောင်းရုံးများနှင့်အတူ Reedsburg, Wisconsin ပြည်နယ်အတွင်းတည်ရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် အသံဖုန်းများအတွက် နှင့် / သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: www.sounddevices.com နှင့် www.videodevices.com.
အသံဖုန်းများအတွက် တီဗီနည်းပညာ 2015-06-29
ယခင်: Lindenwood တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား-Run ကိုစတူဒီယိုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Hitachi HDTV ကင်မရာများကိုအပေါ်မှီခို
နောက်တစ်ခု: Panasonic က VariCam 35 ကင်မရာ Codex သင်္ဘောများ V-RAW Recorder